Fiteny serba - Wikipedia
Ny fiteny serba na fiteny serbiana dia iray amin' ireo karazana fiteny fenitra ampiasain' ny Serba (na Serbiana) ao amin' ireo fiteny serbô-krôatiana na serbô-krôaty ao amin' ny vondrom-piteny slava.
Ireo fiteny ataon' ny mpahay teny sasany hoe fiteny serbô-krôaty na serbô-krôatiana, dia ataon' ny hafa hoe "fiteny slava afovoany-atsinanana" na "fiteny stôkaviana" (štokavski jezik) na "fiteny stôkaviana vaovao" (standardni novoštokavski) na "fiteny bôsniana-krôatiana-môntenegriana-serbiana". Atao hoe cрпски (amin' ny abidy sirilika) na srpski (amin' ny abidy latina) izay tononina hoe /sr̩̂pskiː/) io fiteny io amin' ny teny serba.
Amin' ny fomba fijerin' ny manampahaizana mampifandray ny fiteny sy ny fiarahamonina dia fiteny voafenitra iraisan' ny Serba sy ny Krôatiana sy ny Bôsniaka sy ny Môntenegriana ny fiteny serba, ka ny fototra dia ny endri-piteny (fitenim-paritra) stôkaviana, ary fanovan' io fiteny io ny fiteny krôatiana, ny fiteny bôsniana ary ny fiteny môntenegriana. Soratana amin' ny abidy sirilika sy amin' ny abidy latina ny fiteny serba.
Tsy ny vahoaka serba ao Serbia ihany no mampiasa ny fiteny serba fa ao koa ireo vondrom-pianakaviana vitsy an'isa any amin' ireo firenena manakaiky amin' i Serbia, sy koa ireo Serba nifindra monina nankany Eorôpa Andrefana sy any Amerika Avaratra ary any Aostralia.
Iray amin' ny fiteny ôfisialy telon' i Bôsnia sy Herzegôvina ary fiteny ôfisialy koa ao Môntenegrô ny fiteny serba. Fitenin' ny vitsy an'isa ny fiteny serba ao Krôatia, ao Makedônia Avaratra, ao Romania, ao Hongaria, ao Slôvakia ary ao amin' ny Repoblika Tseka.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_serba&oldid=1010493"
Dernière modification le 31 Martsa 2021, à 11:12
Voaova farany tamin'ny 31 Martsa 2021 amin'ny 11:12 ity pejy ity.